Ndiri musikana ane makore 22 okuberekwa ndinotsvagawo mukomana | Kwayedza
Ndiri musikana ane makore 22 okuberekwa ndinotsvagawo mukomana
14 Nov, 2014 - 00:11	 2014-11-13T13:14:40+00:00 2014-11-14T00:00:23+00:00 0 Views
NDAPOTA vanhu ngavarege kufona panhamba dzinoti 0773 274 384 nekuti ini handizi kutsvaga mudikani uye ndiri muwanano kare. Handizivi kuti ndiani akatumira nhamba dzangu idzi kuKwayedza. Ndatenda.
Ndiri mukomana ane makore 28 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 19 kusvika 23 ari HIV negative. Nhare dzangu 0774 452 870.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvaka shamwarikadzi yave kuda zvemusha. Ndine dambudziko renzeve, akasununguka kunotorwa ropa ngaandibate kana paWhatsApp pa0774 296 602 kana nesms asi kwete kufona.
Ndiri musikana ane makore 22 okuberekwa ndinotsvagawo mukomana wekuroorwa naye ane makore 25 kusvika 35 anoshanda kwete zvekurima nekuti ini ndinoshandawo. Anoda anofona pa0774 219 142.
Ini ndiri mukadzi ane makore 28 nevana vatatu ndiri kutsvaka murume anondiroora ane makore anobvira pa33 kusvika 45 ane rudo rwechokwadi, asingazovengi vana vangu. Kana pane andifarira anondibata pa0774 555 865, vanobhipa nevanotumira call back kwete.
Ndiri mudzimai ane makore 35 ndinotsvaga murume wekushamwaridzana naye ane makore 38 – 45. Nhare yangu 0777 193 260.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvagawo musikana wekuwanana naye ane makore 18-21 ari pachokwadi. Ari HIV negative andifarira ngaandibate pa0782 328 579.
Ndiri mudzimai ane makore 32 nevana 3 ndinotsvagawo murume ane rudo. Nhare dzangu 0773 777 070.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 22 ndakazvarwa ndiri HIV+ uye ndinotsvagawo murume anoda kuroora ane makore 23-32 ari positive seni. Ngaave musoja kana mupurisa chete, ane mwana kana asina. Ini handina mwana, nhare dzangu 0776 989 679.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 ndinotsvagawo musikana ane makore 20 kusvika 25 akanaka pachiso zvese nemwoyo asina mwana. Ndinogara muHarare nhamba dzangu dzinoti 0738 567 090.
Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana 3 ndinotsvakawo murume ari pachokwadi anoda nezvemusha. Vanoda vanondibata pa0715 879 237.
Ndiri mudzimai ane makore 38 nevana vaviri ndinotsvagawo murume akagadzirira kuroora ane makore 40 kusvika 50. Ndiri positive uye ndinoda vakafirwa. Ndibatei pa0773 170 066 kana paWhatsApp.
Makadii veTishamwaridzane? Vose vaifona pa0783 732 422 ndinokumbirawo kuti vachiregera nekuti ndakamuwana wandaida.
Ndiri mudzimai ane makore 34 nemwana 1 ndinotsvagawo murume ane makore 35-37 anotya Mwari uye ari HIV negative. Anoshanda muHurumende ngaandibate pa0777 744 137.
Ini ndiri mudzimai ane makore 36 nevana 3 ndinotsvakawo murume ari pachokwadi anoda nezvemusha. Vanoda vanondibata pa0715 879 237.
Ini ndiri mukomana ane makore 20 ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20 ari pachokwadi nekuda kuroorwa. Munondibata kana paWhatsApp pa0783 189 786.
Ndiri murume akasiyana nemukadzi, handina mwana uye ndine makore 25. Ndiri kutsvaga ari pachokwadi ane makore 18 zvichidzika asina chirwere nekuti ini handina. Ndibatei pa0733 970 415.
Ndiri murume ane makore 30 nemwana mumwe ndinotsvaka mukadzi ane makore 28 zvichidzika, nhamba dzangu 0776 744 652 kana WhatsApp ndiripo.
Makaita basa ndakamuwana wandaida ane rudo neni, Mwari ngaave nemi. Vamwe chiregai kufona panhamba idzi 0783 255 562.
Ini ndiri mukadzi ane makore 48 ndinotsvaga murume ane makore 50 zvichikwira anonamata. Ndinobatika pa0733 629 633.
Ndiri mukadzi ane makore 45 ndiri kutsvaga murume wekufambidzana naye akatendeka ane makore 50 zvichikwira. Ndine vana vangu, vanoda ndibatei pa0733 773 009.
Makadiiko veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 28 asati amboroora. Ndinodawo musikana ane makore 22 zvichikwira, nhamba dzangu idzo 0773 428 949.
Ndiri mukadzi ane makore 28 ndinotsvagawo murume anoda kuroora ane makore 38 – 45 ane vana 2, anoshanda muHurumende. Ngaave akafirwa ari positive asingaratidze hurwere anoda vana vangu. Ndinobatika pa0772 137 844 kana paWhatsApp ndiripo asi vanobhipa necall back kwete.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 22 zvichidzika. Ndibatei pa0783 278 779.
Makaita basa veTishamwaridzane ndakamuwana wandaida saka vachiri kufona pa+27 749 560 263 chiregai henyu, ndatenda.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 29 ndinotsvagawo musikana ane makore 19-20 ari pachokwadi. Ngaandibate pa0778 011 327.
Ndiri mukadzi ane makore 37 nevana vatatu, ndiri kutsvagawo murume ane makore 40 kusvika 43 akavimbika. Nhare dzangu 0777 525 114.
Ndiri mudzimai ane makore 35 nemwana 1 ndiri kutsvaga murume anoroora ari pachokwadi. Ndiri HIV positive uye ndine ziso rimwe rakakuvara saka ndinodawo ari positive. Ngaandibate pa0774 340 839.
Ndiri murume ane makore 30, ndinoshanda seclerk papurazi, handinwi doro uye ndinoda mukadzi ane makore 20 -25 asingarware. Nhare dzangu idzi 0734 042 315.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 23 nemwana mumwe chete, ndinodawo murume ane makore 32 kusvika 38 ane mwana mumwe kana vaviri anoshanda muHurumende. Ndinoita mabasa emawoko, anoda ngaandibate pa0778 097 490 asi macall me kwete.
Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvaga mukadzi akatendeka ane makore ari pakati pe20 ne26 anoda kunotorwa ropa. Ini ndinoshanda muHurumende, fonai pa0715 850 080.
Ndiri mudzimai ane makore 37, HIV positive uye ndinotsvakawo murume wokushamwaridzana naye. Anenge andifarira nhamba dzangu idzi 0771 630 691. Ndinonzi Suzan ndakasimba uye handionekeri kuti ndinorwara.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvagawo musikana anogeza anotya Mwari. Anoda ngaandibate pa0739 216 517.
Vose vaifona pa0775 515 535 chiregai ndakamuwana wandaida.
Ndiri mukomana ane makore 30 ndinogara kwaChihota uye ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 20 kusvika 25. Anoda kuenda kuchechi yepositori ngaandibate paWhatsApp pa0775 886 195.
Ndiri mudzimai ane makore 26 ndinotsvagawo murume akavimbika anoda kuroora akazvipira kunoongororwa ropa. Nhamba dzangu 0782 174 153.
Makadini veKwayedza? Ini ndakambonyorera asi handina wandakagutsikana naye. Ndiri mukadzi ane makore 33 nevana 3 ndinotsvaka murume ane makore 35 kusvika 45.
Vanoda zvekutamba musafone, handisati ndave kunwa mapiritsi. Nhare dzangu 0774 576 019 asi call me back bodo.
Ndiri murume ane makore 30 ndinoshanda kuSouth Africa uye ndiri kutsvagawo musikana akanaka mwoyo nechimiro, mhandara yakazara asati amborara nemurume.
Ngaave ane makore 18 kusvika 25 ari pachokwadi ari kuda zvemba, anoda zvekuroorwa ane tsika. Nhamba dzangu +27 604 711 811, vanonyepa musapedze zvenyu nguva yenyu.
Ndiri mukadzi ane makore 45 ndinotsvagawo murume akatendeka ane makore 50 zvichienda mberi. Ngaandibate pa0713 415 353.
Ndiri mukadzi ane makore 31 nemwana 1 ndiri kutsvagawo murume ane makore 35 — 45 ane mwana mumwe kana vaviri ari HIV positive. Ari pachokwadi nhamba dzangu 0782 958 955.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35, HIV negative uye ndiri kutsvagawo shamwarikadzi iri pakati pemakore 30 kusvika 35. Nhare dzangu dzinoti 0778 304 084.